Tag: jiilka gaadiidka | Martech Zone
Tag: jiilka taraafikada
Buugga Ciyaaraha loogu talagalay Suuqgeynta B2B ee Internetka
Tani waa faahfaahin cajiib ah oo ku saabsan xeeladaha la geeyay kaliya istiraatiijiyad ganacsi oo ganacsi oo ganacsi oo guuleysta. Markaan la shaqeyno macaamiisheenna, tani waxay u dhowdahay muuqaalka guud iyo dareemidda waxqabadkeenna. Si fudud u sameynta suuq-geynta B2B ee internetka ma ahan inay sare u qaaddo guusha, websaydhkaaguna ma ahan inuu sixir u abuuro ganacsi cusub maxaa yeelay halkaas ayuu ku jiraa oo way fiicantahay. Waxaad ubaahantahay istiraatiijiyad sax ah si aad usoo jiidato dadka soo booqda oo aad ubadasho
Shalay, waxaan haystay qoraalkan oo aan dhammaystiray waxaanan doonayay inaan gujiyo daabacaadda markii aan biir ku garaacay laptop-kayga. Waxaan rajeynayaa inaysan aheyn karma imaatinka dabadeyda. Laptop-kii wuu badbaaday, laakiin si uun ayaa barta blog-ka loo waayey. Waxaan qorayaa qoraalkan oo ay ku jirto urka daciifka ah ee biirka ee gadaasha ah si aan u xasuusiyo inaan u adkeysto khafiifnimadayda. Waa tan waxaas, waxaan u maleynayaa in tani ay tahay sawir-xumo aad u xun. Muuqaal ahaan, way ka maqan tahay